सुरु इलेक्ट्रनिक्स मोबाइल आईफोन एक्स
नवमबर 17, 2017
एप्पलसँग यसको नयाँ प्रमुख, हो आईफोन एक्स दौडमा पठाइयो। तर के यो आफ्नो प्रतिज्ञा राख्छ वा घोषणा पनि पूर्ण-थकान थियो? नयाँ के हो? यो निश्चित रूपमा आईफोन एक्स सबैभन्दा उच्च मूल्यको साथ हो। आज यहाँ जान्न पाउनुहोस्।
1 आईफोन एक्स कसरी काम गर्दछ?
2 नयाँ डिजाइन - लगभग रिमलेस यन्त्र!
2.1 आईफोन एक्समा क्यामेरा
3 आईफोन एक्स - एक उपकरण जसले पासवर्ड आवश्यक छैन
4 आईफोन एक्समा हम्बुटटनलाई अलविदा!
5 के फेस आइडी प्रतिज्ञा अनुसार काम गर्दछ?
6 गेंडा आईफोन एक्स मा बोल्छ।
7 उपकरण: धेरै कम्प्युटिङ पावरले वायरलेस चार्जको साथ जोडीयो
8 खिलौने परीक्षणकर्ता आईफोनएक्स छ
9 निष्कर्ष: आईफोन एक्स पुन: भण्डारण गरियो
आईफोन एक्स कसरी काम गर्दछ?
नयाँ एक आईफोन एक्स अतिरिक्त वर्गले पहिचानको सामना गर्यो, एक विशाल प्रदर्शन र एनिमेटेड इमोजिस। सबै नयाँ आईफोन एक्स परीक्षामा प्रभावशाली थियो तर अझै पनि यो पूर्ण कट्टर एप्पल प्रशंसकहरूको लागि मात्र विकल्प हो।
यस आधुनिक स्मार्टफोनको भविष्य, एप्पलको ईन्जिनियरहरु को बारे मा भविष्य को रूप मा एक सर्कल को वर्णन को एक प्रमुख आंदोलन संग शुरू भयो, यसको टाउको दुई पल्ट घुमावदार बदल दिए। त्यसपछि स्मार्टफोनले "पर्दा आइडी गरे" लाई यसको स्क्रिनमा रिपोर्ट गर्दछ। तिनको अनुहार प्रमाणिकरण गरीएको छ। अब देखि, स्मार्टफोन केवल प्रयोगकर्ताको हातमा राखिएको छ भने अनलक हुनेछ र इन्फ्रारेड क्यामेराको माध्यमबाट गहिराइको साथ पहिचान गरिएको छ।
सबै भन्दा पहिले, सावधान रहनुहोस्: निस्सन्देह, यो नयाँ छ आईफोन एक्स (भन्नुहोस्: "10", "x") गुणस्तरको। निस्सन्देह यो पनि महंगा छ। यद्यपि, यो फोन हो जुन पहिले नै खरीदारी कार्टमा हुनुपर्दछ? यसले 1149 EUR को 64 जीबी मेमोरी र 1319 GB को साथ 256 GB को आसपास लागत गर्दछ। र जब देखि त्यहाँ एक उपकरणको कुरा हो जुन पहिलो निक्कै पछि धेरै सजिलै लाग्न सक्छ, वा स्प्रिन्टर्स सजिलै संग, तपाईंलाई अतिरिक्त सुरक्षा चाहिन्छ। एप्पल केयरको लागि कार्यक्रमले तपाईंलाई 229 EUR को लागी प्राप्त गर्दछ, एक सुरक्षात्मक आवरण धेरै सस्ता छ।
नयाँ डिजाइन - लगभग रिमलेस यन्त्र!
कम्पनी एप्पल मा छ आईफोन एक्स सबैको वरिपरि डिजाइन नवीकरण गरियो। तिनीहरूले एक लगभग सीमाहीन स्मार्टफोन बनाए र यसलाई धेरै शक्तिशाली चिप र अतिरिक्त सेन्सरसँग लैजान थाले। प्रदर्शनमा भएको छ आईफोन एक्स 5,8 इन्च र यसैले वास्तवमा ठूलो छ। तुलना गरेर, धेरै ठूलो, भारी आइफोन एक्स 8 प्लसको प्रदर्शनले 5,5 इन्च मात्र चलाउँछ। यन्त्रसँग एक घण्टाको चार्जको साथमा आठ घण्टा निदा बिना गन्ती गर्न 24 घन्टा भित्र मात्र छ।
एप्पल अब पहिलो पटक आईफोन एक्समा OLED डिस्प्ले मध्ये एक स्थापना भएको छ, जसमा ब्ल्याक पिक्सेलमा वास्तवमा अन्धकार रहन्छ र प्रकाशित छैन। यसले तपाइँलाई अधिक विपरित दिन्छ, एक बिन्दुमा चलचित्रहरूमा सकारात्मक प्रभाव छ, र एक ब्याट्री लामो समयसम्म रहन्छ। यदि तपाईं विशेषज्ञहरू पछ्याउनुहुन्छ भने, एप्पलसँग छ आईफोन एक्स सर्वोत्तम शीर्ष डिस्पलेन्स, जुन हाल मोबाइल फोनमा अवस्थित छ।
क्यामेरा अन आईफोन एक्स
क्यामेरा हाल बजारमा सर्वश्रेष्ठ मध्ये एक हो। Selfie मोडले तपाईंलाई चित्रहरु लाई गोली माराउँछ जसले पृष्ठभूमिलाई ब्लुक प्रभाव पार्छ। प्रकाश परिस्थितिले उपकरणलाई वास्तविक समयको विश्लेषण गर्दछ। यस प्रकार, अनुहार रोचक रोशनी गर्न सकिन्छ, एकै समयमा पृष्ठभूमि पुरा तरिकाले ब्ल्याक गरिएको छ। यो प्रभावशाली छ - यदि यो काम गर्दछ: यसैले एक एक चरण मा खडा छ र स्पॉटलाइट द्वारा प्रकाशित छ।
को रियर क्यामेरा (12 मेगापिक्सेलको) को iPhone एक्स 8 (प्लस) को जस्तो उच्च त्यस्तै राम्रो छवि प्रदान गर्दछ र वास्तवमा सबै भन्दा राम्रो को एक त्यहाँ बजार हाल छ कि छ। डेलाइटमा, एक रङ-छिटो र उच्च-रिजोल्युशन छविहरू सफल भयो। एक दोहरी जूम संग Telephoto लेन्स / 2.4- एक च / 2.8 अन्तर सट्टा केवल एक च छ। यसको मतलब छ कि दिमागमा हल्का अवस्थाहरू, तपाईले राम्रो तस्वीरहरू पाउनुहुनेछ। अब दुवै लेंसहरू पनि एक ओप्टिकल चित्र स्थिरता छ, जसले क्यामेरा हल्ला कम गर्नुपर्छ। फोटोग्राफी ब्लग "Fstoppers" ले YouTube को एक भिडियो फुटेज लिएर भिडियो अपलोड गरेको छ आईफोन एक्स एक पेशेवर Panasonic GH5 को तुलना मा 2000 यूएस डलर। निष्कर्ष: आईफोन एक्स प्रभावशाली छ।
साथै 240 रेकर्डिङ प्रति सेकेण्डमा गति गति भिडियोहरू पूर्ण HD गुणमा रेकर्ड गर्न सकिन्छ। 4K भिडियोहरू अब 60 फ्रेमहरूको प्रति सट्टा 30 प्रयोग गरेर प्रति सेकन्डमा कैद गर्न सकिन्छ। यसले क्लिपहरू चिकनी हेर्न सक्छ। यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि 4K60FPS को मात्रा प्रति मिनेट 400 मेगाबाईट्स को प्रयोग गर्दछ। पारंपरिक पूर्ण HD चलचित्र प्रति 90 एमबी मात्र खरिद गर्दछ।
आईफोन एक्स - एक उपकरण जसले पासवर्ड आवश्यक छैन
धेरै रोचक, तथापि, को चेहरा पहिचान हो आईफोन एक्स, सबैजना आईफोन एक्स चाँडै यसलाई कार मा फेस आईडी प्रविधी को देखने को लागि हात मा लिन चाहान्छ। अनुहार आइडी एप्पलको दर्शन बुझ्न उत्तम छ। प्रविधिले दुई निर्मित इन्फ्रारेन्ड सेन्सरहरूद्वारा काम गर्दछ जुन 2-D तस्बिरहरू दुवै सँगै र मालिकको अनुहारको 3-D मोडेल सिर्जना गर्दछ। 2-D मोडेल प्रयोगकर्ताको छालामा अनुमान गरिएको 30 000 अवरक्त बिन्दुहरू प्रयोग गरी सिर्जना गरिएको छ। यो छवि त्यसपछि संख्यात्मक मानमा रूपान्तरण गरिएको छ र स्थानीय रूपमा विशेष रूपमा सुरक्षित क्षेत्रमा स्मार्टफोनमा भण्डार गरिएको छ।
धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि, टेक्निकल सब्जलेट र विवरणहरू वास्तवमा फरक छैन। उनीहरूको पछिल्ला भावनाहरू उनीहरूलाई अझ महत्त्वपूर्ण छ: तपाईं अहिले उनीहरूको कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? जवाफ धेरै सजिलो छ किनकि त्यहाँ कुनै पनि पासवर्डहरू थिएनन्। पृष्ठभूमिमा टेक्नोलोजी गायब हुन्छ, यो क्षणमा अझ सहज हुन सक्दैन। अन्तमा, राम्रो तरिकाले सुरक्षित यन्त्र हो आईफोन एक्स जहाँ सबै शब्दहरू पासवर्ड टाइप गर्न प्रयोगकर्तालाई कष्टप्रद रोक्न सकियो। पर्दाको माथिल्लो किनारामा टचले के गर्छ? राम्रो लाग्थ्यो त्यो "होइन" हो। तर यस आईफोन एक्स मोनब्रायू सानो हत्यारा सुविधा हो: एक नयाँ "TrueDepth क्यामेरा", जसको साथ उपकरण अनलक छ।
एप्पलले यस सुविधालाई फेस आईडी भनिन्छ। यो केवल एक साधारण अनुहार पहिचान होइन कि एक एकल फोटोको साथ बाहिर जानेछ, धेरै एन्ड्रोइड उपकरणहरूमा सम्भव छ। यसको सट्टा, एक जटिल अवरक्त मोड्युल क्यामेराको साथ काम गर्दछ। यदि निर्धारित कोड पहिले नै भन्डारित अनुहारको मेल खान्छ भने, स्मार्टफोन अनलक छ। अवरक्त टेक्नोलोजीको लागि धन्यबाद, यो पनि अन्धकारमा काम गर्दछ। सबभन्दा दोस्रोको अंशमा हुन्छ। अनुहार आइडीको सेटअप विशेष रूपमा सहज हुन्छ र विशेष रूपमा एक मिनेट भन्दा कममा यो पहिले देखि नै समाप्त भएको छ। यसो गर्दा, प्रयोगकर्ताले पूर्वनिर्धारित छवि विवरणमा आफ्नो टाउको2पटक सर्कल गर्नु पर्छ, जस्तै कि उसले आफ्नो नाक टिपको साथ सर्कल लगिरहेको थियो। त्यसपछि त्यो हो।
आईफोन एक्समा हम्बुटटनलाई अलविदा!
उपकरण लगभग सीमाहीन छ। एप्पल कम्पनीले यहाँ होम बटन हटाउनुभएको छ, जसको बारेमा कार्यहरूको सम्पूर्ण श्रृंखला स्मार्टफोन भित्र नियन्त्रण गरिएको थियो। यहाँ थियो, उदाहरणको लागि, फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर प्रयोग गरेर अनलक गर्नुहोस्। नयाँ नेभिगेसनको लागि कहिलेकाँही जीर्णोधुनिक आन्दोलनहरू सजिलै र चाँडो सिक्न सकिन्छ। तलको भिडियोमा तपाईंले व्यक्तिगत सुविधाहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
के फेस आइडी प्रतिज्ञा अनुसार काम गर्दछ?
कसैलाई आफैलाई प्रश्न सोध्नुहोस्: के अनुहार आइडी को साथसाथै विज्ञापित गर्दछ? हो, सयौं नमूना सञ्चालन पछि - घाम, टोपी, विग, अन्धकारमा जस्तै विभिन्न Outfts संग - यो यसो गर्न सकिन्छ: यो मजबूती कम्तिमा predominantly काम र छ। आईफोन एक्स को एक अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण यो उपकरण एक सेकेण्डमा अनलक गर्छ। त्यसपछि, तपाईंको औंला तल सबै भन्दा माथि अनुप्रयोगहरूसँग सुरूवात स्क्रिनमा जानको लागि माथिबाट स्वाइप गर्न महत्त्वपूर्ण छ। एउटा अनावश्यक बिन्दु, यसैले एप्पलले समाचार रोक्न चाहँदैन।
कहिलेकाँही, तथापि, प्रविधिले यसको सीमा सम्म पुग्छ। फेस आइडी सफ्टवेयर कहिलेकाहीँ एक धेरै ढोकाको कोणबाट समस्या छ, जस्तै जब स्मार्टफोन धेरै बन्द वा अनुहार भन्दा लामो टाढा भन्दा टाढै भन्दा बढी हुन्छ। पहिले देखि नै एक प्रमुख ओप्टिकल परिवर्तन आदेश को बाहिर एल्गोरिथ्म प्राप्त गर्न पर्याप्त छ। यदि तपाईंसँग तपाइँको मुख र नाकको सामने स्फूर्ति छ भने वा तपाईंको पूरा दाढ़ी टाढ्नु हुन्छ भने, पासकोड पनि प्रविष्ट गर्नुपर्दछ। यदि सही, विस्तारित फेस आईडी रेकर्ड गरिएको डेटा पहिले नै भण्डारण गरिएको 3D मोडेलमा हो। एप्पल भन्छ, निर्माण गरिएको चेहरा पहिचान अनुकूली तंत्रिका सञ्जालसँग सञ्जाल भएकोले, चेईकल आईडी अधिक र अधिक सटीक हुन्छ।
फेस आइडीका लागि सबै डेटा क्लाउडमा भण्डार गरिएको छैन, तर फोनमा भण्डारण भएको छ। अनुहार आइडीले सक्रिय इन्टरनेट जडान बिना काम गर्दछ। यहां सम्म कि धेरै सुरक्षा सुविधाहरु संग फेस आईडी बिल्कुल सही छैन। ती "वाल स्ट्रीट जर्नल" को एक बन्दर ट्रिपहरू द्वारा यो प्रविधि लेगे। निस्सन्देह यो एक विशिष्टता हो, तर विश्वकर्मी ह्याकरले प्रणाली बन्द गर्न वा अवस्थित सुरक्षा उपायहरू तोक्न प्रयास गर्नेछ। अर्को पटक यो थाहा हुनेछ कि फेस आईडीको सुरक्षा कसरी उच्च छ।
गेंडा आईफोन एक्स मा बोल्छ।
युनिकोर्न पछिको प्रविधिले स्मार्टफोन अनलक गर्दा मात्र प्रयोग गर्दैन। अनुप्रयोगहरूमा संवेदनशील डेटा र पहिला टच आइडी प्रयोग गरेर थप प्रमाणीकरण आवश्यक छ, अब TrueDepth क्यामेराको पहुँच पाउनुहोस्। यी बैंकिंग अनुप्रयोगहरू छन्, विभिन्न स्मार्ट गृह अनुप्रयोगहरू: जस्तै एरलो वा पासवर्ड व्यवस्थापक आईपस पासवर्डबाट सुरक्षा घोटाला। आईफोन एक्स पत्ता लगाउँदा अलार्म स्वचालित रूपमा बजाउँछ। फोन पनि तेर्सोमा उभिएर छिटो छ, यदि तपाईंले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्न भने - ऊर्जा बचतको लागि। आगमन सन्देशहरू उपकरणमा प्रदर्शनमा गोपनीयताको सुरक्षा गर्न स्मार्टफोनको प्रदर्शनमा प्रदर्शन गर्दा देखाउँदछ। यी सबै बुद्धिमानी कार्यहरू हुन् जुन प्रत्येकको साथ आराम र उपयोगिता जोड्दछन्।
Animojis त्यहाँ: तिनीहरूलाई संग, प्रयोगकर्ताहरूले इमोजी, को गोबर प्रति unicorn को ठूलो संख्या मा आफ्नै अनुहार अभिव्यक्ति र प्रत्यक्ष वास्तविक समय पेस गर्न सक्नुहुन्छ। पछि तपाईं सानो फोटोहरू पठाउन सक्नुहुन्छ: मित्रहरूलाई पठाउनुहोस्, उदाहरणका लागि, iMessage को साथ वा व्हाट्सएप र कम्पनीसँग भिडियो फाइलको रूपमा के यो गीमिकिक सफलताले अझ प्रमाणित गरेको छैन, तर यो हास्यास्पद छ। धेरैका लागि, प्रकार्य पहिले देखि नै राम्रो कुरा हो कि नयाँ आईफोन एक्स प्रस्ताव गर्नु पर्छ।
उपकरण: धेरै कम्प्युटिङ पावरले वायरलेस चार्जको साथ जोडीयो
बाँकी रहेका उपकरणहरू आईफोन एक्स 8ER मोडेलको रूपमा ठूलो रूपमा हो। निर्मित इन A11 बायोनिक प्रोसेसर हाल सबै भन्दा तेज पत्ता लगाउन सक्दछ। कुनै पनि अवस्थामा, उहाँले मानकमा राम्रो प्रदर्शन आंकडा कटौती - विशेष निष्पादन खोज्ने कार्यक्रमहरू: ज्याकेबेन्चमा, उहाँले केही क्षेत्रमा दुई प्रतियोगिहरुको रूपमा धेरै बिन्दुहरू जित्नु भयो। नयाँ आइफोन एक्स्स हाल बजारमा सबैभन्दा छिटो स्मार्टफोन हुन्।
das आईफोन एक्स बिना केबलहरू चार्ज गर्न सकिन्छ र बजारमा उपलब्ध सबै क्यूई चार्जिङ स्टेशनहरूसँग शुल्क लगाउन सकिन्छ - जसमा आईकेई फ्रान्सेली र आईकेई लैंपहरू समावेश छन्। चार्जिङ केबलमा आवाश्यक भन्दा बढी लाग्छ। तर यो अब केबल संग भड्किएको छैन। ब्याट्री जीवन भन्नाले एप्पल दुई घण्ट भन्दा अधिक छ आईफोन एक्स7संग यो मामला हो। यो यथार्थवादी छ: "सामान्य" उपयोगको साथ दिनको अन्त्यमा, 40 प्रतिशत ब्याट्रिको बारेमा। त्यसोभए तपाईं सजिलै दिन दिन सक्नुहुनेछ, तर दुई दिन बिजुली बिना सम्भव छैन।
खिलौने परीक्षणकर्ता आईफोनएक्स छ
यहां सम्म कि सानो भन्दा पहिले आईफोनएक्स छ।4वर्ष पुरानो खेलौना परीक्षक पहिले नै आईफोन अनलक गरिएको छ र यसलाई यसको यूट्यूब गतिविधिहरूको लागि प्रयोग गर्दछ।
निष्कर्ष: आईफोन एक्स पुन: भण्डारण गरियो
संग आईफोन एक्स एप्पलमा अघिल्लो यन्त्रहरूको जादू फर्काउँछ। यो एक ठूलो स्क्रिन हुन चाहनेहरूको लागि उत्तम ब्यालेन्स हो, तर 8 प्लस मोडेल धेरै शक्तिशाली देखिन्छ। योमा बनाइएको क्यामेराहरू अहिले बजारमा सबै भन्दा राम्रो छन्, 256 गीगाबाइट स्टोरेजको साथमा यी उपकरणहरू स्पेसबाट बाहिर निस्कने छैनन्। अवस्थित गृह बटनको बावजूद प्रयोगकर्ताको सञ्चालन हुन्छ। नयाँ OLED स्क्रिन राम्रो देखिन्छ, फेस अनलक फेस आईडी एक धेरै उत्साहजनक प्रविधी हो। यसले दैनिक प्रयोगमा अद्भुत काम गर्दछ। यसले हाम्रो मोबाइल फोनसँग अन्तरक्रिया गर्ने तरिकालाई आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्दछ। भविष्य आईफोन X पीढहरू निश्चित रूपमा प्रौद्योगिकी बाट लाभ उठाउनेछन्। यहाँ इलाज गर्न केहि चिन्ता समस्याहरू छन्। तर फेस आइडीले अझ राम्रो काम गर्न बढी समय चाहिन्छ - यसले लाइटको लागि लामो-समय परीक्षण ल्याउनेछ।
वैसे पनि यन्त्रको लागि एक एक्सप्रेस खरिद सिफारिस सम्भव छैन। 1149 यूरो (64 GB) र 1319 यूरो (256 GB) सँग यो हो आईफोन एक्स एक धेरै महंगी यन्त्र र वर्तमानमा सबैभन्दा महंगे स्मार्टफोन्सको बीचमा छ। एक Gesichtsentsperrung र 300 यूरो गर्न ठूलो स्क्रीन पहिले नै सस्तो छैन आईफोन 8 (प्लस) आक्रमण गर्न आवश्यक वा शुल्क अविश्वास कि, प्रत्येक व्यक्ति आफूलाई आफूलाई लागि निर्धारण हुनुपर्छ। किनकि क्यामेरा, प्रोसेसर, मोबाइल प्रविधि र प्रोसेसिंगले फरक फरकसँग फरक फरक छ। एक Android अपरेटिङ सिस्टम संग तुलनात्मक प्राविधिक प्रतियोगिता EUR 500 सुरु किनेको गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, ग्यालेक्सी S8, यी एप्पलको पारिस्थितिकी तंत्रसँग काम गर्दैन। र चार्जरलाई थप खरिद गरिएको छ।
अघिल्लो लेखटाढाको नियन्त्रित विमान
अर्को लेखनरिवल तेल